Fatty Liver Symptoms In Nepali: फ्याटी लिभर रोग के हो? फ्याटी लिभरको लक्षणहरुको
फ्याटी लिभर (Fatty Liver Disease) रोग प्राय हर कोहीमा हुने एक आम समस्या हो । सामान्य तया हरकोही ब्यक्तिको कलेजोमा थोरै मात्रामा फ्याट (बोसो) हुने नै गर्दछ । तर यदि सामान्य भन्दा बढी कलेजोमा बोसो जम्मा भयो भने फ्याटी लिभर रोग हुँदछ ।
फ्याटी लिभर हुनुको अर्थ कलेजोमा बोसो निर्माण बृद्दि हुनु हो । उमेर बढी भएका वा शरीरमा फ्याट (बोसो) को मात्रा बढेर मोटो भएकाहरुमा वा अल्कोहल बढी पिउने वा कुनै रोगको औषधी लामो समय सम्म खाई रहेकाहरुमा यो समस्या बढी मात्रामा हुने गर्दछ । सामान्य ब्यक्तिमा पनि फ्याटी लिभर रोग हुने सम्भावना हुँदछ।
नर्मल फ्याटी लिभरले कुनै असर गर्दैन तर यसको हेलचक्राई गरेमा भने यसले लिभर यानिकी कलेजोलाई ड्यामेज पनि गर्न सक्दछ । फ्याटी लिभरलाई मेडिकल चेकअप अनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गर्दै स्थिति अनुसार दर्जा (Grade) मा राखिन्छ । पहिलो दर्जा को फ्याटी लिभर प्राय हरेक ब्यक्तीमा हुन सक्छ । तर फ्याटी लिभर बढ्दै गए यसको दर्जा पनि दोस्रो, तेस्रो गर्दै बढ्दै जान्छ यसरी दर्जा बढ्दै गएमा भने कलेजोलाई ड्यामेज गरी मृत्यु सम्म हुन सक्दछ ।
अन्य विशेष जानकारीहरु पनि पढ्नु होस् :
मधुमेह रोगलाई प्राकृतिक तरिका अनुसार कसरी कन्ट्रोल गर्ने ?
ब्लड प्रेशर हाई हुदा कसरी घटाउने ?
फुड पोइजन कसरी हुन्छ ? फुड पोइजन हुने खानाहरु
फ्याटी लिभर मुख्य २ प्रकारको हुन्छ ।
Alcoholic fatty liver (अल्कोहल सेवनबाट कलेजोमा बोसो जमी हुने फ्याटी लिभर)
Non Alcoholic fatty liver (अल्कोहलको कारण बिना नै कलेजोमा बोसो जमेर हुने फ्याटी लिभर )
Alcoholic fatty liver (अल्कोहल सेवनबाट कलेजोमा बोसो जमी हुने फ्याटी लिभर) :
Non Alcoholic fatty liver (अल्कोहलको कारण बिना नै कलेजोमा बोसो जमेर हुने फ्याटी लिभर ):
यो समस्या अल्कोहल सेवन नगर्नेहरुमा हुने रोग हो । यो अल्कोहल नपिउनेहरुमा हुने फ्याटी लिभर, अल्कोहल पिएर हुने फ्याटी लिभर भन्दा धेरै खतरनाक फैटी लिभर हो । किनकी अल्कोहल को कारण हुने फ्याटी लिभर अल्कोहल पिउन छोडने बितिकै ठिक हुन सुरू हुनेछ । तर अल्कोहल को कारण बिना हुने फ्याटी लिभर शरीरमा भएको गड्बड को कारण बोसो बढेर हुने फ्याटी लिभर हो । यसको उपचार को लागी खानपान र दैनिक जीवनशैली परिवर्तन र दैनिक व्यायाम गनुपर्ने हुन्छ ।
फ्याटी लिभर हुँदा देखिने लक्षणहरु:
Tags: #health #nepal #nepalihealth Fatty liver fatty liver allopathic treatment in Nepali fatty liver best treatment in Nepali fatty liver foods to avoid in Nepali Fatty liver in Nepali fatty liver symptoms in nepali fatty liver treatment homeopathy in Nepali fatty liver treatment in homeopathy in nepali fatty liver treatment in patanjali Nepali fatty liver treatment Nepali fyati liver Liver disease in nepali nepali health nepali health media Nepali Health tips कलेजो रोग के के हो फ्याटी लिभर? के हो फ्याटी लिभर? यस्ता छन् कारण र लक्षण. फैटी लिभरको लक्षणहरु फ्याटी फ्याटी लिभर फ्याटी लिभर को लक्षणहरु फ्याटी लिभर भनेको कलेजोमा बोसो जमेको लिभर हो